Yini ongayibona eFlorence ezinsukwini ezi-3 | Izindaba Zokuhamba
Florencia kungomunye wamadolobha amahle kakhulu e-Italy. Ineminyuziyamu yonke indawo, amasonto amadala, izikwele ezibukekayo, izindawo zokudlela ezinhle, imigwaqo engalibaleki ... Iqiniso ukuthi Izinsuku ezintathu eFlorence Akwanele, kepha anele ukubheka futhi afuna ukubuya.
Uhambo lwami lokuqala lokuya eFlorence kwakuyizinsuku ezi-5, ngakho-ke nganginesikhathi sokungenzi lutho futhi ngenza okuningi. Uma ngicabanga ngalezo zinsuku, ngibukeza ukuvakasha kwami ​​nokuthi yini eyayisele emgodini wenkino, ngingashiya izeluleko ezithile ongakubona eFlorence ezinsukwini ezi-3 kuphela.
Njengoba sishilo, kuneminyuziyamu, izigodlo namasonto yonke indawo. Umuntu angahlukanisa ukuvakashelwa phakathi komlando namasiko. Isigaba sokuqala sizofaka phakathi izindlu ezindala nezigodlo, amasonto, imigwaqo enezingubo zeMedici ... futhi esigabeni sesibili kufanele sengeze iminyuziyamu.
Ezindabeni zenkolo, inkolo nokwakhiwa kwezakhiwo nenkolo namasiko, i iglesias yizona ezikhanga kakhulu. Ngakho-ke, ngeluleka ukuthengwa kwethikithi lamahora angama-72 ukuze bheka iDome, iBell Tower, iCrypt, iBaptistery kanye nemnyuziyamu.
Namuhla ithikithi libiza ama-euro angama-18 futhi uma uzohlala amahora angama-72 kufanelekile ngoba kungukuvakasha okuthe xaxa futhi kulula ukuwasabalalisa ngezinsuku ezimbalwa. Vele, kokuthakazelisa kakhulu, khuphukela esiqongweni seDuomo, kufanele ukhokhe imali ethe xaxa futhi kufanelekile. Okuningi kwe.
Ukukhuphuka izitebhisi ezincane yikhona okungcono kakhulu futhi imibono evela phezulu mihle. Isonto ngokwalo aliyona into enkulu kimi, ngakho-ke ngigqamisa ukukhuphuka kwedome njengokuhamba phambili kakhulu. 463 izinyathelo ...
Angiwathengi amakhadi ezivakashi ngoba ngithanda ukukhetha ukuhambela kwami ​​ngokuya ngentshisekelo yami yangempela. Kepha kukhona ikhadi labavakashi, iFirenze Card, okubiza ama-euro angama-85 nokuthi ngama-euro angama-7 angeziwe akuvumela ukuthi usebenzise izithuthi zomphakathi. Lapho uhlela ukuvakasha kufanele ukhumbule amashejuli, uyakhomba:
ukungena eDome kusuka ngo-8 ekuseni, kepha kuyavalwa ngeSonto.
ukungena kweBell Tower kusuka ngo-8: 30 ekuseni. Akuwona ama-elevator futhi izinyathelo zengeza ku-414.
ukungena ku-crypt kuvulwa ngo-10 ekuseni bese kuvalwa ngeSonto nangezinsuku zemicimbi yezenkolo.
indawo yokubhabhadisa iphambi kweCathhedral futhi ivula ngabo-11: 15 ekuseni.
Manje, ake sikhulume nge- iminyuziyamu eFlorence. Kuneminyuziyamu evulekile, idolobha liyimnyuziyamu evulekile, asinakuphika, kepha kukhona neminyuziyamu ejwayelekile futhi kufanelekile ukuvakashela eminye yayo.
Ungakhetha phakathi kwe- Igalari ye-Accademia, Igalari ye-Uffizzi, iPalazzo Strozzi, iPalazzo Vecchio Museum, iPalazzo Pitti ne Umhubhe weVasari, the IPalazzo Davanzati, iMedici Chapels, iBargello Museum noma i-Opera del Duomo Museum.
Lena nje eminye yeminyuziyamu eFlorence, miningi eminye, ngakho-ke kimi kuyalulekwa ukunquma ukuthi yini esiyithandayo nokuthi yini esifuna ukuyibona nokuthi yini esingayithandi, ngoba ezinsukwini ezintathu asikho isikhathi sokulahlekelwa. Isibonelo, ngithanda iNkathi Ephakathi futhi ngaphezu kwezigodlo ezinkulu izindlu ezincane ngakho nginqume vakashela uPalazzo Davanzati, indlu yangenkathi ephakathi izindaba eziningi. Ithikithi lishibhile futhi likuvumela ukuthi uthole ukuthi abantu abacebile babehlala kanjani emakhulwini eminyaka adlule: izindlu zokulala, izindlu zokugeza, amakhishi, amagumbi okudlela ...
Ngivakashele i- Palazzo Vecchio ngombhoshongo wayo omude wensimbi, isitayela sayo phakathi kwangeNkathi Ephakathi neseRenaissance nobuhle USalone dei Cinquecento.
Ukubona ubuciko uFlorence ungcono kakhulu, kusobala, ngakho-ke kufanele uvakashele i-Uffizzi Gallery noma i-Accademia Gallery, loDavida. Lapho uzobona imisebenzi kaBoticelli, Giotto, da Vinci, Michelangelo, Perugino, Giambologna ...
Uma isimo sezulu sihle, ngiyeluleka qasha ibhayisikili bese uhambahamba. Lokho kukuvumela, ngaphezu kokuzula emigwaqweni yangenkathi ephakathi, ukufinyelela kolunye uhlangothi lomfula IPitti Palace. Lapha ungazi izindawo zayo zangaphakathi ezinhle, iRoyal Apartments enemisebenzi kaRubens, uRafael noma iTitian, noma udabule izingadi zayo ezinhle.
Ngenze lokhu kokugcina futhi angizisoli ngakho. I- Izingadi zaseBoboli IPalazzo ayinakulibaleka, inezihlahla, izithombe ezibaziweyo, imithombo, izingadi ezinetiyela, ukubukwa komfula nedolobha, imibala emihle ... konke ezingadini ezakheke kusukela ngekhulu le-XNUMX kuya kwele-XNUMX.
I-Las AmaMedici Chapel Banhle futhi ngoba bahlonipha lo mndeni omuhle owenzele okuningi kakhulu idolobha, kanjalo no IBargello Museum ngobuningi bokuqoshwa. Ngemuva kwalokho, idolobha linamasonto yonke indawo futhi a imyuziyamu yezikhali kumnandi kutholakala kancane, i Sibbert Museum, kimi kunconyiwe uma uthanda iNkathi Ephakathi njengami noma uhamba nezingane. Omunye umnyuziyamu engiwuthandile kakhulu yi IGalileo Museum, enezimbulunga nezinsimbi ezihlukile nezinelukuluku lokuhlola izinkanyezi nabanye.
Okokugcina, yize izinsuku ezintathu zingesona isikhathi eside, kufanele usebenzise amathuba emini nasebusuku. Uma ubuya ohambweni lwakho lokuhamba kufanele ugeze uphinde uphume futhi, uthenge izinto zesikhumba, izinto zokubhala noma umane uhlale noma kuphi ucabange ngesigqi sedolobha, abantu bakhona, izivakashi zalo.
Ungathenga isemishi elenzelwe ukuhlala bese ubuka umfula, ubheke ngasePonte Vecchio ethandwayo, ungalokotha ukhuphuke ngebhayisikili uye ePiazzale Michelangiolo, lapho okuhle khona ISonto LaseSan Miniato namathuna ayo nokubukwa kwayo okuhle.
Kunezindawo zokudlela eziningi ezungeze i- Imakethe yaseFlorence futhi ngaphakathi emakethe efanayo. Ngincoma zombili lezi zindawo, ikakhulukazi ukuthatha uhambo lokuzulazula eMakethe, ukuthenga isinkwa bese ngidla isidlo sakusihlwa kwenye yezindawo zokudlela esigcawini.
Izinsuku ezintathu eFlorence Zizoba zincane kuwe, kepha lokho kuhle ngoba ukubuyela endaweni ebesiyithanda kuyinto enhle kakhulu kumhambi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Florencia » Yini ongayibona eFlorence ezinsukwini ezi-3
Yini ongayibona eCroatia
Yini ongayibona eHuesca